DEGDEG: Sarkaal Boolis ah oo ka badbaaday Qarax laga beegsaday iyo faahfaahin.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DEGDEG: Sarkaal Boolis ah oo ka badbaaday Qarax laga beegsaday iyo faahfaahin..
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa qarax caawa ka dhacay magaalada Muqdisho oo laga beegsaday sarkaal ka tiran ciidamada Booliska.
Qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka Warshadda Caanaha, agagaarka Albaraka, degmada Hodon ee magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in lala beegsaday Gaashaanle Sare Maxamed Daahir oo ka tirsan Saraakiisha Booliiska.
Sarkaalka yaa la xaqiijiyey inuu ka badbaaday Qaraxa oo ahaa Miino lagu qarxiyey gaarigiisa oo goobta marayey, balse uu wax yar uga fakaday qaraxa.
Sarkaalkan oo hore dhowr jeer uga badbaaday qaraxyo lala beegsaday oo la doonayey in lagu khaarijiyo. Lama soo werin qasaare kale oo qaraxu dhaliyay.
Previous articleFadeexadii ka dhacday Doorashada Kursigii HOP#233 (Laba Musharax oo qaadacay iyo Sabab yaab leh)
Next articleAlshabaab oo shaacisay magaca iyo Beesha uu kasoo jeedo Ninkii isku Qarxiyey C/casiis Afrika (Akhriso)